Raiisal Wasaare Xasan Cali Kheyre oo Guddoomiyey Shir looga hadlay Amniga Soomaaliya[ Sawirro] | SAHAN ONLINE
Raiisal Wasaare Xasan Cali Kheyre oo Guddoomiyey Shir looga hadlay Amniga Soomaaliya[ Sawirro]
MUQDISHO – Raiisal Wasaaraha Xukuumadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta shir guddoomiyay shir looga hadlayay amniga guud ee dalka,kaasoo ay kasoo qeybgaleen xubno ka socday Beesha Caalamka.
Shirkan ayaa diirada lagu saaray amniga dalka iyo u diyaar garoowga shirka Todobaadka soo socda ka qabsoomi doono magalaada Brussels ee dalka Belgium-ka.
Shirka Brussels ayaa looga hadli doonaa wakhtiga kala guurka oo ah xilliga la filayo inay dalka ka baxaan Ciidamada AMISOM iyo sidii ay Ciidamada Soomaaliya ula wareegi lahaayeen amniga Soomaaliya.
Dowladda Federaalka iyo wakiilo matalayay beesha caalamka ayuu u dhaxeeyay shirkan,waana mid qayb ka ah qorshayaasha ugu waaweyn ee ay Dowladda Federaalku ugu diyaar garoobayso in Ciidamada Qaranku ay la wareegaan ammaanka guud ee dalka marka ay wakhtigooda dhammaystaan kuwa midowga Afrika ee AMISOM.
Shirka todobaadka danbe ka dhici doona dalka Biljimka ayaa beesha caalamka loogu soo bandhi doonaa Istiraatiijiyadda ay Dowladda Soomaaliya u dooneyso inay kula wareegto ammaanka guud ee dalka marka ay baxdo AMISOM.